कहिले सक्छ एनआरएनएले लाप्राक पुनर्निर्माण? :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
कहिले सक्छ एनआरएनएले लाप्राक पुनर्निर्माण?
लाप्राकवासीको तेस्रो हिउँद पनि हिउँमै
एनआरएनएले पुनर्निर्माण गरिरहेको गोरखाको लाप्राकस्थित गुप्सीपाखा। तस्वीर: तुले गुरुङ
गोरखाको लाप्राकका भूकम्प प्रभावित बासिन्दा तेस्रो हिउँद पनि टहरोमा बिताउँदै छन्।
वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते बारपाक केन्द्र रहेर गएको भूकम्पले छिमेकी गाउँ लाप्राकका ६१७ घर भत्कियो। भूकम्प गएकै दिनदेखि गुप्सीपाखामा अस्थायी टहरो हालेका उनीहरू गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले घर बनाइदिने भएपछि त्यो ठाउँ छाडेर यताउता बस्न थाले। कोही पुरानै गाउँ लाप्राक फर्किए।
एनआरएनएले बस्ती पुनर्निर्माणको जिम्मा लिए पनि पूरा गरेको छैन। एक वर्षभित्र बस्ती निर्माण सक्ने बताएको एनआरएनएले तेस्रो वर्ष पनि बस्ती निर्माण सक्ने गरी घर निर्माणलाई तीव्रता दिन सकेको छैन। कहिले काठको अभाव देखाउँछ त कहिले बर्खा र हिउँदको चिसो।
लाप्राकका भूकम्प प्रभावितहरू नयाँ घर पाउने आशामा छन्। तर यो हिउँद पनि उनीहरूले हिउँकै छानोमा बिताउनुपरेको छ। रिनजुलुङ, सानो रिनजुलुङ, भूमे सामुदायिक बन क्षेत्रमा टहरो हालेर बसेका लाप्राकी एनआरएनएले छिटो घर बनाइदिए आफूहरूलाई बस्ने ठाउँको जोहो हुने भन्दै घरको पर्खाइमा वनमा बास बसिराखेका छन्।
एनआरएनएले समयअनुसार काम सकेको भए लाप्राकीले गत वर्ष नै घर पाइसकेका हुन्थे। दुई हजार ७ सय मिटर उचाइमा हिउँको चिसोमा दिनरात कटाउनुपर्ने थिएन, न्यानोसँग घरभित्र बस्न पाउने थिए।
तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास तथा लाप्राक नै पुगेर २०७३ वैशाख १२ मा एनआरएनए र सरकारबीच बस्ती निर्माण सम्झौता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको भए पनि अझै यो बस्ती पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एक वर्षभित्र बस्ती निर्माण गरिसक्ने बताएका थिए, तर उनको कार्यकालमा त्यो काम पूरा गर्न सकेनन्।
अहिले गोरखा नै घर भएका भवन भट्ट एनआरएनको अध्यक्ष छन्। बस्ती निर्माण परियोजना सुरू गर्दा उनी एनआरएनएको उपाध्यक्ष थिए। एनआरएनएका पदाधिकारी बेला बेला हेलिकप्टर लिएर बस्ती निर्माण अवलोकन गर्न लाप्राक पुग्ने गरेका छन्। यो बस्ती पुनर्निर्माणमा नेपाली सेनाले पनि सहयोग गरिरहेको छ।
लाप्राकीमा एकीकृत बस्ती बसाल्ने ठाउँ नहुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी भुमे सामुदायिक बनको १८.३२ हेक्टर जमिन भोगचलनको अधिकारसहित लाप्राकीलाई दिइएको थियो। यो जमिनमा ६१७ घर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, उद्यानलगायत संरचना तयार गर्ने एनआरएनएको योजना भए पनि अहिलेसम्म घर निर्माण नै नसकिँदा अरु योजनाले गति लिएको छैन।
एनआरएनएले गुप्सीमा घडेरी तयार गरी ५ सय ७३ वटा घर बनाउँदै छ। दुइ कोठे एक तले घरको गारो स्थानीयस्तरमै बनाइएको इटाको छ। छानो जस्तापाताको। यस्तो घर बनाउन एनआरएनएले प्रति घर दुइ लाख ५० हजार लगानी गर्दैछ।
लाप्राक धार्चे गाउँपालिका ४ मा पर्छ। लाप्राक नै घर भएका सन्तबहादुर गुरुङ सन्तोष गाउँपालिकाका प्रमुख छन्।
एनआरएनएले समयमै बस्ती पुनर्निर्माण नसक्दा लाप्राकीले दु:ख पाएको उनले बताए।
‘एनआरएनएले घर सम्पन्न गर्नै सकेन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘सबै घर निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै ती घरहरू हामी बुझ्छौं, किस्ताबन्दीमा घर हस्तान्तरण हुँदैन।’
एनआरएनएले केही घर सम्पन्न भएको भन्दै हस्तान्तरणको तयारी गरेको छ।
पहिलो चरणमा नाम छुटेकाहरूको पनि घर निर्माण गर्ने काम बाँकी रहेको गुरुङले बताए। एनआरएनएले सिंगो लाप्राक पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिएकोले सरकारबाट पाइने तीन लाखका दरले अनुदान लाप्राकीले लिएका छैनन्।
हेर्नुहोस् एनआरएनएले पुनर्निर्माण गरिरहेको लाप्राकस्थित गुप्सीपाखा।
सबै तस्वीरहरु: तुले गुरुङ/लाप्राक।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २८, २०७५, ०७:२९:००